Izindaba - Hlola ukuthi kungani ukuphakama kwamakhadibhodi kuguquka.
Uma kukhulunywa ngokushoda kwamakhadibhodi kathayela, abantu abaningi bazocabanga ngamakhadibhodi kathayela. Eqinisweni, lesi simo asifani nokuguqulwa. Kunconywa ukuthi uphenye kusuka ezicini eziningana ezifana nezinto zokusetshenziswa, imishini yethayela eyodwa, ama-flyovers, imishini yokunamathisela, amabhande wokuhambisa, ama-roller roller, nengxenye engemuva yomugqa wethayela ukuhlaziya izizathu nokuzixazulula.
(1) Izinto zokusetshenziswa
Iphepha likathayela elisetshenzisiwe kumele lihlangabezane namazinga kazwelonke. Isibonelo, ngama-gramu ayi-105 wephepha lukathayela, umkhiqizi wephepha oyisisekelo kufanele ahlangabezane nezinga likazwelonke leleveli B. Ingcindezi yendandatho yephepha le-C alanele, futhi kulula ukudala ukuwa kukonakala.
Umsebenzi wokulawulwa kwekhwalithi wefekthri ngayinye yamabhokisi kufanele ube lapho. Inkampani iqala ngokubeka izinga lenkampani, bese idinga ukuthi umphakeli akwenze ngokuya ngezinga.
(2) umshini wethayela owodwa
1) Izinga lokushisa.
Ngabe izinga lokushisa lamarola okonakala lanele? Lapho izinga lokushisa lendonga lukathayela linganele, ukuphakama kukakhokho okwenziwe akwanele. Ngokuvamile, inkampani ephethwe kahle izothumela umuntu ukuthi abheke ukushisa kwawo wonke umugqa womhlangano (kunconywa ukuthi umuntu ophethe ubhayela enze lo msebenzi). Lapho kutholakala inkinga yokushisa, umphathi osebenzayo kanye nokaputeni womshini baziswa ngesikhathi, omakhenikha bayaziswa ukuthi babhekane nayo, futhi onke amasilinda okufudumeza umzimba ayahlolwa futhi akhokhelwe njalo ngenyanga.
2) Ukungcola ebusweni be-roller lukathayela.
Ngaphambi kokuqala nsuku zonke, i-roller kathayela iyafudunyezwa futhi ihlulwe ngamafutha enjini elula ukuhlanza i-slag nodoti ku-roller lukathayela.
3) Ukulungiswa kwegebe phakathi kwama-roller kubaluleke kakhulu ekukhiqizeni.
Igebe phakathi kwe-roller yokunamathisela kanye ne-roller corrugating imvamisa lapho i-roller corrugating ifudunyezwa imizuzu engu-30 ukukhulisa ukwanda kwe-roller corrugating. Ubukhulu bephepha elinesisindo esiphansi enkampanini lisetshenziswa njengegebe. Kumele ihlolwe nsuku zonke ngaphambi kokuqala umshini.
Igebe phakathi kwe-roller okonakele ne-roller yengcindezi ngokuvamile linqunywa ngokuya ngesimo sokukhiqiza, futhi kufanele kuqinisekiswe ukulingana okuhle.
Igebe phakathi kwensimbi yensimbi engenhla ne-roller ephansi ebaluleke kakhulu ibaluleke kakhulu. Uma ingalungiswa kahle, umumo wokonakala okhiqiziwe uzoba ngokungajwayelekile, okungenzeka kakhulu ukuthi ubangele ukujiya okunganele.
4) Izinga lokugqoka i-roller lukathayela.
Bheka isimo sokukhiqizwa kwerekhodi lukathayela nganoma yisiphi isikhathi, ukuthi kunesidingo yini sokukufaka esikhundleni salo. Kunconywa ukusebenzisa i-tungsten carbide roller lukathayela, ngoba ukumelana kwayo nokugqoka okuphezulu kunganciphisa izindleko zokukhiqiza. Endabeni yokusebenza okuzinzile, kulinganiselwa ukuthi izindleko zizotholwa zingakapheli izinyanga eziyi-6-8.
(3) Dlulisa iflaya elingaphezulu kwephepha
Musa ukuqoqa iphepha elilodwa lethayela elilodwa ku-flyover. Uma ukungezwani kukhulu kakhulu, iphepha elilodwa lethayela lizoguga futhi amakhadibhodi ngeke abe mkhulu ngokwanele. Kunconywa ukufaka uhlelo lokuphathwa kokukhiqizwa kwekhompyutha, olungavimba ngempumelelo izehlakalo ezinje ukuthi zenzeke, kepha manje abakhiqizi abaningi basekhaya banazo, kepha ngeke bazisebenzise, ​​okuwukuchitha.
Lapho ukhetha umenzi wokufakwa kwephepha le-flyover, kufanele kubhekwe ngokucophelela ukugwema ukuthi umkhiqizo ungathintwa ukungena komoya we-flyover. Uma ukungeniswa komoya kwe-flyover kukhulu kakhulu, kulula kakhulu ukubangela ukuthi i-corrugation iwe. Naka ukuzungeza kwe-eksisi ngayinye, bese uhlola ukufana kwe-eksisi ngayinye kaningi futhi unake ngaso sonke isikhathi.
(4) Namathisela umshini
1) Iroli yokucindezela ku-roller yokunamathisela iphansi kakhulu, futhi igebe phakathi kwama-roller acindezelayo kufanele lilungiswe, ngokuvamile liphansi ngo-2-3 mm.
I-2) Naka ukuqina kwe-radial ne-axial ye-roller yengcindezi, futhi ayikwazi ukuba yindilinga.
3) Kunolwazi oluningi ekukhetheni ibha yokuthinta. Manje izimboni eziningi ngokwengeziwe zikhetha ukusebenzisa izinduku zokucindezela oxhumana nabo njengamasondo okugibela (cindezela ama-roller). Lokhu ukuqamba okukhulu, kepha kusenezimo eziningi lapho ama-opharetha adinga ukulungisa ingcindezi.
4) Inani lokunamathisela akumele likhulu kakhulu, ukuze lingadali ukususwa kwe-Lengfeng. Akukona ukuthi uma inani elikhulu le-glue likhula, kungcono ukulingana, kufanele sinake ifomula yokunamathisela kanye nenqubo yokukhiqiza.
(5) ibhande le-Canvas
Ibhande le-canvas kufanele lihlanzwe njalo kanye ngosuku, futhi ibhande le-canvas kufanele lihlanzwe njalo ngesonto. Ngokuvamile, ibhande le-canvas lifakwa emanzini isikhathi esithile, kuthi ngemuva kokuthanjiswa, lihlanzwe ngebhulashi locingo. Ungalokothi uzame ukonga umzuzwana wesikhathi futhi ubangele ukulahleka kwesikhathi esiningi lapho ukunqwabelana kufinyelela ezingeni elithile.
Ukuze kukhiqizwe imikhiqizo esezingeni eliphakeme, amabhande e-canvas ayadingeka ukuthi abe nokungena komoya okuhle. Ngemuva kokufinyelela isikhathi esithile, kufanele ithathelwe indawo. Musa ukwenza ukuthi amakhadibhodi asontwe ngenxa yokonga izindleko zesikhashana, futhi inzuzo ingaphezu kokulahleka.
(6) Ingcindezi roller
1) Kufanele kusetshenziswe inani elizwakalayo lama-roller wokucindezela. Ngezinkathi ezahlukahlukene, inani lama-roller wokucindezela asetshenzisiwe ahlukile, futhi kufanele lishintshwe ngesikhathi ngokuya kwesimo sangempela.
2) Izinkomba ze-radial ne-axial zeroller roller ngayinye kufanele zilawulwe ngaphakathi kwemicu emi-2, ngaphandle kwalokho i-roller yengcindezi enesimo se-oval izokweqa ukubola, okuholele ekushiseni okunganele
3) Igebe phakathi kwe-roller yengcindezi kanye nepuleti elishisayo kufanele lilungiswe, kushiye indawo yokulungiswa okuhle, okungashintshwa ngokuya ngokuma (ukuphakama) kukonakala.
I-4) Kunconywa ukuthi abakhiqizi bamakhathoni basebenzise amapuleti ashisayo okucindezela esikhundleni sama-roller wokucindezela, empeleni, okushiwo ukuthi izinga lokusebenza kwabasebenzi kumele lifinyelele ezingeni lokusetshenziswa elifunwa yimishini ezisebenzelayo.
(7) Isigaba sangemuva somugqa wethayela
Ukungena nokuphuma kommese wokusika kufanele usebenzise igiya lelanga elifanele. Ngokuvamile, kungama-degree angama-55 kuya kwangama-60 ngesihloli se-Shore hardness ukugwema ukuchoboza amakhadibhodi.